टोटनहमका आठ खेलाडीमा देखियो संक्रमण! – PathivaraOnline
Home > खेलकुद > टोटनहमका आठ खेलाडीमा देखियो संक्रमण!
टोटनहमका आठ खेलाडीमा देखियो संक्रमण!
admin December 9, 2021 खेलकुद 0
काठमाडौं । इंग्लिस क्लब टोटनहमका आठ जना खेलाडी तथा पाँच जना कर्मचारीमा कोरोना भाईरसको संक्रमण देखिएको छ ।
पछिल्लो पटक खेलाडी र क्लब कर्मचारीमा गरेको परीक्षणमा टोटनहमका आठ जना खेलाडी तथा पाँच जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको टोटनहमका मुख्य प्रशिक्षक एन्टोनियो कोन्टेले बताएका छन् । युरोपा कन्फेरेन्स लिग अन्तर्गत रेनसविरुद्धको खेल अघि टोटेनहमका खेलाडीमा कोरोना देखिएको हो ।
टोटेनहमले बिहीबार रेनससँग खेल्ने तालिका छ । अन्तिम ३२ को सम्भावना कायम राख्न टोटेनहमलाई रेनेसविरुद्ध खेल जित्नुपर्नेछ । कोरोना भाईरसका कारण यतिबेला एन्टोनियो कोन्टेसँग उनको पुरै टिम निकै दबावमा छ । युईएफएले उक्त खेल तोकिएको मितिमै हुने जनाएको छ ।
त्यसैगरी, टोटेनहमले आइतबार प्रिमियर लिगमा ब्राइटनविरुद्ध खेल्ने छ । कोरोना भाईरसका कारण टोटनहमले प्रिमियर लिगसँग ब्राइटोनसँगको खेल पछाडी सार्नका लागि आग्रह गरेको छ ।
होशियार! चिसोमा रक्सी सेवन गर्ने बानी छ, एकपटक पढ्नुहोस्